I-Semalt ihlinzeka i-GitHub: I-Web Ehamba phambili Ekhishwa Ngezinto Eziningi
GitHub ungenye yezinsizakalo ezidume kakhulu zokukhishwa kwedatha. Leli thuluzi lingakhipha inombolo enkulu yamakhasi ewebhu ngendlela efomethiwe efundekayo. Iyaziwa kakhulu ngobuchwepheshe bayo bokufunda umshini futhi ifanele amabhizinisi amancane kuya naphakathi. Izici ezihlukile kunazo zonke zeGitHub zixoxwa ngezansi:
NgeGitHub, ungasusa amakhasi amaningi wewebhu njengoba ufuna futhi uguqule idatha ibe yifomethi njenge-CSV ne-JSON. Ungabuye futhi uqaphele ikhwalithi yedatha ngenkathi ishaywa; I-GitHub idlula izixhumanisi ezingenalutho futhi ikuthola idatha ehleliwe kahle ngokushesha.
Ngokungafani neminye imisebenzi yendabuko yokwehlisa idatha (i-7), i-GitHub idonsa idatha yakho futhi ilungisa amaphutha amancane nezinkulu ngokuzenzekelayo - grain treatment. Ihlinzeka ngolwazi olunembile nolungalungile futhi luqaphele ikhwalithi yedatha yedwa. Ungaphinda uhlakaze amafayela e-PDF nemibhalo ye-HTML ngaleli thuluzi.
I-GitHub iyaziwa kakhulu nge-interface yayo yomsebenzisi-friendly futhi isevisi ethembekile njalo. Akudingi noma yisiphi isondlo futhi ingasetshenziswa izinyanga emva kwezinyanga. Ungakhetha kusuka kumafomethi ahlukahlukene bese uvumela i-GitHub ukuba ilandise futhi ithumele idatha kufomethi efiselekayo. Kuyafaneleka ukuqala, abafundi, othisha, kanye nama-freelancers.
Ulwazi olusuka kumawebhusayithi ashukumisayo
Nge-GitHub, ungafaka imininingwane kusuka kumawebhusayithi amabili alula futhi ashukumisayo. Leli thuluzi libuye lishaye idatha kusuka kumasayithi omphakathi, izingosi zokuhamba nezingosi ze-e-commerce ngaphandle kokukhishwa. Ngaphezu kwalokho, lishintsha amakhodi e-HTML aphansi futhi ilungisa wonke amaphutha amancane ngokuzenzakalelayo.
Amandla okuphatha noma ukudala izikripthi kanye nama-agent
Esinye sezici ezivelele kakhulu zeGitHub yilawo angakwazi ukuphatha nokudala kokubili ama-agent kanye nezikripthi. Leli thuluzi lifaka izenzo eziningi zokulungiswa kalula futhi lingakwazi ukufaka amakhasi angama-web ayizinkulungwane eziyishumi kumbuzo wamaminithi. NgeGitHub, ukufuduka kwama agent kanye nokubhaliselwa komsebenzisi wedatha phakathi kwezinhlelo kwenziwa ngaphandle kokukhishwa.
Uguqula idatha engakhiwe ukuze idatha ehlelekile futhi isebenzisekayo
Ngokungafani nokungenisa. io kanye ne-Scrapy, i-GitHub iguqula idatha engakhiwe ukuze ihlele, isebenzise futhi ihlelwe idatha emasekhondi ambalwa. Leli thuluzi lilungele ngokuqondile abahleli nabangewona uhlelo. Akugcini nje ukulimaza amakhasi akho wewebhu kodwa futhi kuqondisa indawo yakho futhi kusiza ukuthi udale ukuhola okuningi kwi-intanethi. Idatha ingathunyelwa kumafomethi we-XLS, i-XML, i-CSV ne-JSON, ukusiza umsebenzi wabamabhizinisi namabhizinisi ngezinga elithile.
GitHub angakha ama-agent ngaphakathi kwemizuzu futhi ayidingi amakhono okuhlela noma amakhodi. Ngokusekelwe kobuchwepheshe bokufunda umshini, leli thuluzi libeka uphawu ngokuzenzakalelayo imiphumela futhi lishaye ama-URL amaningi ngesikhathi esifanayo. Ngaphezu kwalokho, iyakwazi ukukhipha indawo yonke ngombuzo wemizuzwana futhi iyasiza kakhulu ezitolo zezindaba ezifana ne-CNN, i-BBC, i-New York Times ne-Washington Post.
Mhlawumbe yisikhathi sokuhlola amasu akho okukhwabanisa idatha futhi usebenzise i-GitHub ukuze ikhule ibhizinisi lakho.